“Masiirka Ummadda Waxa Ka Talin Kara Nin Aan Halkaa (Hunguriga) Ka Hadlaynin…” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Masiirka Ummadda Waxa Ka Talin Kara Nin Aan Halkaa (Hunguriga) Ka Hadlaynin…”
Hargeysa (Hubaal) – Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro), ayaa si adag uga hadlay Go’aankii labada Gole ee Baarlamaanka Somaliland ku ansixiyeen Heshiiska uu Imaaraadku Saldhigga Ciidan kaga dhisanayo Magaalada Berbera.
Sheekh Aadan-Siiro, ayaa Khudbaddii Jimcaha ee Shalay kaga warramay Qaabka Xukuumaddu u martay in Baarlamaanku ansixiyo Heshiiskaasi, waxaanu sheegay in 144-kii Xildhibaan ee u codeeyay ansixinta Heshiiska Saldhiggu ay dhammaantood qaateen Lacag Caddaan ah, laakiin aanay eegin Masiirka Dadka iyo Dalkaba.
Sheekha oo Arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidhi, “Waxaan si dul-xaadis ah wax uga taaban doonaa dhacdooyinkii Xanuunka badnaa ee aan ka tarjumayn Halgankii qaatay Lixdanka Sannadood ee Ummaddani soo martay, dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee 800 boqol oo Sannadood wixii aynu ku soo tacabnay ee dhismayaal ahaa, ee Adduun ahaa, ee ahayd Carruurteennii kumaankunka ahayd ee Qaarkood dhinteen, qaarkood naafoobeen, ee Hooyo kastaa markay Xasuusato Wiilkeedii Aqoonta lahaa (ee la dilay) ay ooyeyso. Waxay u muuqatay dhacdadii U kasta u dhacday ee Ummadda oo dhamina ay daawanaysay in Macnaheedu tahay in Lixdankaa Sannadood Halgankeedii iyo 800 boqol ee Sannadood wixii aynu tabcaynay aynu u baa’biinay inaynu xor noqono, laakiin waxay ahaayeen ama noqonaysaa Ciyaarihii Gobollada ka jiray.”
Sheekhu waxa kale oo uu ka warramay dhibaatada Aakhiro ku sugaysa Qofka Ummad Muslimiin ah talo u qabta ee Xaqa ka baydha, “Saxaabi ayaa Cumar Binu Khadaab ku yidhi, waxaan ka maqlay Rasuulka CSW, Ninka talada Muslimiinta wax ka qabta, waxa la keenaa Qofkaa Maalinta Qiyaamaha Jidka Siraad ee dul-mara Naarka in badan Qur’aanku ka warramay. Haddii Qofka Talada qabtay uu wanaajiyo, Dariiqa Xaqa ah raaco, Nin jeclaysiga iska daayo, Dollarka habeenkii la tirinayo uu iska daayo wuu nabadgalayaa ayuu yidhi Rasuulku (CSW). Laakiin ka aan la waafajin waxa la go’aya biriijkaa (Naarta dul-mara) ayuu yidhi Rasuulku (CSW), waxaanu Naarta ku hoobanayaa 70 Sannadood in loo socdo.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray, “Qofku hadduu is-leeyahay waa Maalmo, hadduu Qofku ka fikirayo inta uu Maalmu ku noolaanayo, Rasuulku (CSW) wuxuu leeyahay Qofkaasi qaaday Talo Muslimiintu leeyahay wuxuu dul-taagan yahay Biriijkaa (Naarta dul-mara).”
Sheekhu wuxuu cambaareeyay Xildhibaannadii ansixiyey Heshiiska Saldhigga Milletari ee Imaaraadka, waxaanu yidhi, “Goleyaashii baa ansixiyey (ayaa lagu odhanayaa Heshiis), Adeer 144 Qof oo wax isku og oo la garanayo mid walba intuu qaatay (Lacag) ayay ku odhanayaan Masiirkii Ummadda ayay ka talinayaan. Ninka yidhaahda Masiir-bay ka taliyeen (Baarlamaanku) ILAAHAY buu been u sheegay, Ummaddana been buu u sheegay, Waayo? Adeer halkaa ayay ka taliyeen (Hungurigooda). Masiirka Ummadda waxa ka talin kara Nin aan halkaa (Hunguriga) ka hadlaynin.”
Sheekhu waxa kale oo uu khudbaddiisa ku sheegay dhibaatada uu Maalinta Qiyaame mudanayo Qofka inta Adduunka la joogo aan xaqa xukumin, “Rasuulku (CSW) wuxuu yidhi, Dadka wax kala xukumaa waa Saddex, laba Dadka kala xukumaa Naarta ayay ku jiraan-buu yidhi Rasuulku, mid Dadka kala saaraana Jannada ayuu ku guuleystay ayuu yidhi Rasuulku (CSW).
Qof xukumay wax uu u ogyahay inaanu Xaq ahayn Rasuulku (CSW) wuxuu yidhi ‘kaasi waa Ehelu naar’. Mid kalena waa Mid aan ogayn wax la kala macaashayo, wuxuu muu hubsanin, muu deraasaynin, waxa uu xukumayana Aqoon uma laha, kaasina Ummad dhan xuquuqdeedii ayuu lumiyey oo Naar-buu u badheedhay ayuu yidhi Rasuulku (CSW). Mid kalena sidii xaqu ahaa ayuu xukumay, kaasina Jannada ayuu u badheedhay ayuu Rasuulku yidhi (CSW). Haddaba Qofka Xalay lala shiray Saacadaha la garanayo, ee intaas oo Qof u tageen, Cadadka lacagta la siiyey la garanayo, arrinka lagala hadlay la hayo ee Ummadda kala saaraya arrinkiisu muxuu noqonayaa (Aakhiro).”
Sheekhu wuxuu sheegay in Heshiiska Saldhigga Imaaraadka Dadku ku qaybsamay, “Masiirkii Ummadda oo laga hadlayo ayay Dadkii Saddex u qaybsameen, Mid waa kaa badheedhay ee Dollarka tirinaya ee caddeystay ee aan Cidna ka qarsan, Dadna waa tiradaa yar ee kooban ee 80 jirka Gadhka cadi ku jiray ee lahaa waar waa lagu jabayaaye ka daaya, ee Dhulka la jiid-jiidayey ‘Subxaannallaah’. Taasi oo hab-dhaqankii aynu ku soo caano maallay aad iyo aad (uga hor-imanayey). Haddii Wanaagga la diido oo la yidhaahdo Dhulkaa Dadka la jiidayaa, hadday Arrintu noqoto koox baan samaystay Aniga I ilaalisa Dadkana Dhulka jiidda adeer ma soconayso, Waayo? Qof aan Qorigiisa haysan ma jiro.”
Sheekhu wuxuu farriin u diray Hoggaamiyeyaasha Dawladda, “Waar waxaydaan awoodi karayn inaan Berri wax ka qabataan ka daaya ayaanu leenahay. 144 la ogyahay lacagtay qaateen, oo la garanayo Ciddii loo diray iyo Xadhiggii loo maray, oo aan Heshiiska Arag, oo aan Heshiiska ka doodin waa Arrin Dalku ku jabayo. Waxaanu leenahay Dalka lama siisan karo $ 1.2 Milyan Dollar, Go’aankii ka soo baxay Golaha Guurtida iyo Golaha Wakiilladu guud ahaan Sharci muu ahayn, inaanu shaqeynin baanu ku shaqeynaynaa. Haddii Dalka sidaa lagu dhaqayana wixii ka yimaadda waxa Tacaamuli doona kuwaa habeennimada ugu tagaya guryahooda.”
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud, waxa kale oo uu khudbaddiisa Jimcaha ku sheegay in Beesha dhexe ku fashilantay hoggaaminta Dalka, “Waxa dhacay Hab-dhaqan aynaan hore u lahayn, kaasi oo keenaya in Beeshii dhexe ee Somaliland bud-dhigga u ahayd inay ku fashilantay Halgankii Ummadeed, isla-markaana ay awoodi kari la’yihiin inay Dalka ku hoggaamiyaan Wanaag iyo khayr iyo ururin iyo in Ummaddu wax wada yeelato, meeshiina ay ka maqan tahay inay yidhaahdeen meeshii ma wadi karayno.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray oo uu ku soo gebogabeeyay, “Saldhigga Berbera-na wax la aqbali karayo maaha, Go’aanka la leeyahay waa lagu ansixiyeyna Lacagtii lagu bixiyey baa Cadadkeedii la hayaan, Qof walba intuu qaatay baa la hayaa, waxaana loo soo bandhigi doonaa Ummadda.”